Slant အမျိုးအစား CNC ခုံစက်စက်ရုံ - China Slant အမျိုးအစား CNC токтокစက်စက် - ထုတ်လုပ်သူများ
အမြန်နှုန်းမြင့် Flat CNC ခုံစက် CKH3628 အသေးစားအစိတ်အပိုင်းများခုံအလျားလိုက် CNC Turning
အမည်: ပြားချပ်ချပ် CNC ခုံစက်ဗိုင်းလိပ်တံအမျိုးအစား - A2-5 ပုံစံ - CKH3628 ဗိုင်းလိပ်တံမှအပေါက် - ၅၀ မီလီမီတာစားပွဲကျော်လွှဲခြင်း - ၄၀၀ မီလီမီတာရထားကျော်မောင်းနှင်မှု - ၁၆၀ မီလီမီတာအမြင့်ဆုံးအထည်အရှည်: ၃၈၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံမြန်နှုန်း: ၃၀၀၀rpm / min အမြန်နှုန်းပြားကုတင်ကုတင် CNC အလှည့်ကျစက်စက် CKH3628 အသေးစားအစိတ်အပိုင်းများခုံအလျားလိုက် CNC 1. လှည့် 1. X-axis နှင့် z-axis သည် Taiwanprecise linear လမ်းညွှန်ရထားလမ်းကို အသုံးပြု၍ အမြန်နှုန်းသည် 20M / min ဖြစ်သည်။ 2. ဝက်အူအမှားအမှားလေဆာ interferometer အားဖြင့်လျော်ကြေးငွေဖြစ်ပါတယ် ...
Shaft Metal Cutting HTC58100 အတွက် 11KW Spindle Motor Slant Bed CNC ခုံစက်
အမည်: CNC токарစက်ပုံစံ - HTC58100 အထည်အမြင့်အရှည် - ၁၀၀၀ မီလီမီတာတွင်းအပေါက်မှတဆင့် - အမီ ၈၇ မီလီမီတာ Z အကန့်အသတ်ဖြင့်သွားလာခြင်း - ၁၁၂၀ မီလီမီတာဗိုင်းလိပ်တံ - ၁၁kwkw Spindle Rotatio အမြန်နှုန်း - ၂၆၀၀rpm X Axis Limited ခရီးသွားခြင်း - ၃၅၀ မီလီမီတာ Slant Bed CNC токтокစက် - ရိုးသတ္တုဖြတ်ရန် 1. အရည်အသွေးမြင့်သတ္တုများပုံသွန်း, မြင့်မားသောတည်ငြိမ်မှုဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်း။ ၂။ X၊ Z သည် linear နည်းလမ်းဖြစ်ပြီးအမြန်လမ်းလျှောက်မှု 20 m / min ဖြစ်သည်။ (၃) ထိုင်ဝမ်မြန်နှုန်းမြင့်ဗိုင်းလိပ်တံ၊ တိကျမြန်မြန်သောဖြတ်ခြင်းစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေသည်။ 4. စုံတွဲ, bearing, ခ ...